Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Doorashada Heer Federaal oo la doortay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Doorasho adag oo loogu tartamay Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federaala ayaa la soo gabagabeeay, iyadoo laba wareeg lagu kala baxay.
Wareegii koowaad ee tartanka Xilka Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Hee Federaal ee FIET oo ay isu sharxeen 5 xubnood ayaa waxaa isugu soo haray labada musharax oo kala ah:
1- Maxamed Xasan Cirro – Guddoomiyihii hore ee Guddigii la isku khilaafsanaa
2 Iyo Liibaan Maxamed Xasan (Liibaan Shuluq) oo Galmudug kasoo galay Guddiga
Musharax Maxamed Xasan (Cirro) ayaa helay wareegii koowaad 12 cod, halka Liibaan Maxamed Xasan uu helay 8 cod.
Doorashada wareegii labaad waxaa xilka guddoomiyaha Guddiga Doorashada ee Heer Federaal ku guuleystay Maxamed Xasan Cirro oo helay 14 cod, halka Liibaan Maxamed Xasan uu helay 10 cod.
Dhinaca kale waxaa guddoomiye ku xigeenka guddiga Hirgalinta doorashooyinka loo doortay ee heer Federal Qareen Mawliid Mataan Salaad
Previous articleDoorashada Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Heer Federaal oo xiiso gaara yeelatay (Yaa ku tartamaya?)
Next articleXOG: Sidee mar kale kusoo baxay Guddoomiyihii hore ee Guddiga Doorashada? (Yaa watay Cirro & Shuluq..)